सभामुख « Janata Samachar
महराको आज अन्तिम सुनुवाइ, के होला फैसला ?
काठमाडौं । वहिर्गमित सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । महराको मुद्दामा के होला भनेर सर्वत्र चासो भइरहेको बेला आइतबार सुनुवाई हुन लागेको हो । वर्हिगमित सभामुख महराले
देउवाले अग्निलाई संसदमै भने– तपाई कसको सभामुख ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि सहयोग र समर्थन छ । सभामुखमा सापकोटालाई समर्थन गरेकै
संसदले पायाे सभामुख
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाले नेतृत्व पाएको छ । चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन प्रतिनिधिसभाले आइतबार सभामुख पाएको हो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा सभामुख बन्नुभएको
सभामुख उम्मेदवार सापकोटाको सुनुवाई स्थगित
काठमाडौं । सभामुखका एकल उम्मेदवार अग्नि सापकोटाको सुनुवाई स्थगित भएको छ । काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या प्रकरणलाई आधार बनाएर ‘सापकोटालाई सभामुख नबनाउन’ परेको रिटमा सर्वोच्चले सापकोटालाई उपस्थितका लागि आइतबार अदालत